Sendikà · Mey, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Sendikà · Mey, 2008
Tantara mikasika ny Sendikà tamin'ny Mey, 2008
Nikaragoa : Fanaraha-maso akaiky ny tetikasam-panjakana mivoy “fampindramam-bola madinika”
Amerika Latina29 Mey 2008
Nandritra ny fandaharana “Esta Semana” [Ity herinandro ity] izay fandaharana fampahalalam-baovao maharitra 60 minitra mpandeha amin'ny fahitalavitra any Nikaragoa, nisy tatitra sy fanadihadiana ny mikasika ny fomba fanao manodidina ny Usura Cero (zanabola aotra) izay tetikasam-panjakana mivoy “fampindramam-bola kely” hoan'ireo vehivavy izay mpandraharaha “madinika”. Naren Mayorga no mamintina ao amin'ny...
Bahrain : “Fahirano” atao ireo teratany Bangladeshy
Bahrain28 Mey 2008
Taorian'ny nitrangan'ny loza andro vitsy izay, izay namonoan'olona ity teratany Bahrainy iray nohon'ny fandavany handoa ireo fanampin-karama 500 fils (1.3 USD) izay notakian'ity Mekanisiana teratany Bangladeshy iray tamin'ny asa notanterahiny, dia nahanton'ny fanjakan'i Bahrain ny fanomezana fahazahoan-dalàna miasa hoan'ny teratany Bangladeshy rehetra. Misy aza vondrona Solombavam-bahoaka izay miketrika ny hanolorana...
Maraoka : hatezerana sy alahelo noho ny orinasa izay nirehitra
Maraoka13 Mey 2008
Nisiana haintrano mahatsiravina roa tao an-drenivohitry ny toe-karena maraokana, Casablanca, tamin’ny faran’ity herinandro ity ka ny iray tao amin’ny orinasa mpanao kidoro ary ny faharoa kosa tao amina orinasa fanaovan-damba iray. Ampolony ny olona maty nandritra izany haintrano izany noho ny nanidian’ny mpampiasa ny toeram-piasana (avy any ivelany). Mitafatafa amin’alahelo...
Bangladesh09 Mey 2008
Tamin'ity herinandro ity, ny blogy Bangla eran-tany dia niraondraona tamin'ny andrana sy fandalinana manodidina ny 1 Mey, ankalazaina eran-tany ho toy ny andron'ny mpiasa eran'izao tontolo izao sy andron'ny asa. Be ny fahadisoam-panantenana teny anivon'ireo mpitoraka blaogy izay nanindry fa angamba efa very, navalon'ny fotoana, ny foto-kevitra marina nijoroan'ity andro...